Norway ma Yeelan karto Waxbarasho Imaamnimo | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Norway ma Yeelan karto Waxbarasho Imaamnimo
Dowladda Norway oo 2015-kii qorshaysay in la eego suurto galnimada in waxbarashada sare ee dalkan lagu daro waxbarasho imaamnimo iyo hoggamiyeyaasha kale ee muslimiinta iyo wasiirka waxbarashada iyo is dhex galka oo maya yiri.
«Wasaaradda waxay wada hadal kala yeelatay arrintan kulliyadda fikradaha (Det teologiske fakultet) ee jaamacadda Oslo waxaana cadaatay inaan la dabaqi karin waxbarasho imaamnimo oo buuxda xilligan» ayuu warqad uu u diray baarlamaanka dalka ku yiri wasiirka tacliinta iyo isdhexgalka Jan Tore Sanner (H)
Sanner ayaa hoosta ka xariqay «way adag tahay in la dhiso hal waxbarasho imaam oo wada dabooli karta baahida caqiidooyinka dhammaan muslimiinta».
Walow la diiday waxbarasho imaamnimo laga dhaqan geliyo dalka haddana sida laga soo xigtay wargayska waxaa jirta shan milyan oo krone oo loogu talo galay in lagu hormariyo waxbarasho kale oo bedel u noqon karta hoggaamiyeyaasha diineed.
Xisbiga Venstre ayaa sannooyin badan u soo halgamayey in laga helo waxbarashada Norway qayb u gaar ah hoggaamiyeyaasha diineed ee diimaha kale ee aan ahayn kristanka balse arrintaas waxbadan kama qabsoomin.
2016 waxay soo jeedinta arrintani la tiil wasiirkii xilligaas ee soogalootiga iyo isdhexgalka Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug ayaa ku dhawaaqday xilligaas in kiiskaasi ay u gudbisay wasiirka dhaqanka iyo Linda Hofstad Helleland, taasoo aakhirkii ku biyo shubatay go’aankaan cusub ee wasiir.